Polotics – Page 2 – Daily Som
Home»Archives»Polotics (Page 2)
Dastuuka la sheegay in la xaday oo qoraya in Madaxwaynaha uu dalka ka talinayo Mudo 5 sano ah
By Staff on April 26, 2018 Polotics
Ku simaha Gudoomiyaha Baarlamaanka Fedaraalka ah ee Soomaaliya Cabdiweli Ibraahim Muudey ayaa sheegay dhawaan in la xaday Dastuurkii rasmiga ahaa ee dalka, kaas oo ay hireay udiyaariyeen Odayaasha dhaqanka iyo ergooyinkii bulshada laga soo dhex xulay. Maanta ayaa waxaa loo qaybiyay Xildhibaanada Baarlamaanka Nuqulo ka mid ah dastuurka uu sheegay Gudomiye muudeey in la xaday. […]
Xildhibaan Shaacir oo markiisa ujawaabay Wasiir Xoosh oo sheegay in ay is sharxi karaan wasiirada doonaya G. Baarlamaanka
By Staff on April 23, 2018 Polotics
Gudiga Doorashada ee dhawaan la magacaabay ayaa ee doorashada gudoomiyha Baarlamaanka Fedaraalka ah ee Soomaaliya ayaa ujawaabay wasiirka Dastuurka Xukuumada Soomaaliya oo maalinimadii shalay bogiisa Facebook ga ku soo daabacay in uu is sharxi karaan Xildhibaanada Wasiirada ah. Xildhibaan shaacir oo horay usheegay in ay wasiirada Mar ka hore is casilaan hadii ay doonayaan in […]
By Staff on April 22, 2018 Polotics
Wasiireka Dastuurka Xukuumada Soomaaliya Cabdiraxmaan Jabriil Xoosh ayaa sheegay in uu is sharxi karo qof wasiir ah isla markaana aanu jirin sharci ka reebya in uu utartamo xilka Gudoomiyaha Golaha shacabka. Wasiir Xoosh oo soo qaatay Qodobka 59 ee dastuurka ayaa sheegay in in uu qodobka uu ugal yahay Wasiirada in ay is sharaxaan, hadii […]
Xildhibaan shaacir “Araajida lagama Aqabalayo xildhibaanada wasiirada ah ilaa ay is casilaan”
Waxaa sii xoogaysanaya Tartanka loogu jiro Xilka Gudoomiyha Baarlamaanka Fedaraalka ah ee Soomaaliya, kaas oo dhawaan baneeyay Gudoomiyihii Haayay lixdii sano ee ugu danbeysay. waxaana soo baxayo shuruudo adag oo lagu xirayo Wasiirada Doonaya in ay qabtaan xilkaan, waxaama loo sheegay in marka hore ay baneeyaan kagada Wasiirnimo si ay ugu soo baxaan Booska banaan […]
Gen Morgan oo si diiran loogu soo dhaweeyay Magaalada Garowe
By Staff on April 21, 2018 Polotics
waxaa si diiran magaalada Garowe loogu soo dhaweeyay Gen. Maxamed siciid Morgan oo ka mid ah shakhsiyaadka ugu Cd cad isla markaana shaaciyey in ay u taganyihay qabashada xilka Madaxweynenimadda Maamulka Puntland doorashadda dhici doonta sanada soo aadan ee 2019. General Moogan ayaa soo dhaweyntiisa waxaa ka qaybgalay masuuliyiin ka tirsan hay,adaha Puntland, bulshada rayidka […]
Gudoomiye Muudeey “Dastuurka Saxda ahaa ee dalka waa laxaday”
Gudoomiyaha ku xigeenka Kuubaad ee Golaha Shacabka Cabdiwali Sheekh ibraahim Muudey ahna ku simaha Gudoomiyaha Baarlamaanka ayaa sheegay sheegay in hadda dowladda Soomaaliya aysan ku shaqeyn dastuurkii ay meelmariyeen Odayaasha dhaqanka ee loogu tala galay in dalka lagu maamulo. Gudoomiyer Muudeey ayaa tilmaamay in dastuurka hadda ay ku shaqeyso Dowladda Soomaaliya uusan ahayn dastuurkii ay […]
Jawaari Oo Baarlamaanka Ka hor Cadeeyay in uu Is Casilay
By Staff on April 12, 2018 Polotics
Gudoomiyahii hore ee Baarlamaanka Fedaraalk ah ee Soomaaliya Maxamed shiikh Cusmaan Jawaari ayaa Xildhibaanada Baarlamaanka ka hor sheegay in uu is casilay. Jawaari oo horay looga dalbaday in uu xilka ka dago ayaa is jiid jiid dheer ka dib aqbalay maalmo ka hor asiga oo ugu danbayn ku dhawaaqay in uu is casilayo, maalinimada arbacada […]
Erdogan oo Mareykanka ku yeri xaq uma lihidiin inaad sii joogtaan Suuriya
By Staff on March 21, 2018 News, Polotics, WORLD
Madaxwaynaha Dalka turkiga rajab Deyib Erdogan ayaa dhaleeceeyay Joogitaanka Maraykanka ee Waqooyika Suuriya. Hadal uu Baahiyay kanalka NTV ee garka loo leeyahy isag oo soo xiganaya Khudbad uu madaxwayne Erdogan ka jeediyay Xaflad ka dhacday Caasimada Ankara, ayuu ku dhaleeceeyay kus ii sugnaashaha Maraykanka ee Waqooyiga Ciraaq. “Waxay sheegaan inaysan ka tagi doonin Manbaj, laakiin […]
Kusimaha Gudoomiyaha Baarlamaanka oo soo saaray Amar deg deg oo xildhibaanada maqan dalka ku imaanayaan
Gudoomiye ku xigeenka koobaad ee Baarlamaanka ahna ku simaha Gudoomiyaha Golaha shacabka Jamhuuriyada Fedaraalka ah ee Soomaaliya Cabdiwali shiikh Ibaraahim Muudeeyay ayaa dalbaday xildhibaanada dalka ka maqan ay dib ugu soo laabtaan dalka. uyeerista Xildhibaanada dalka ka maqan ayaa ku aadayso iyada oo maalamha soosocda Cod loo qaadi doono Gudoomiyaha Baarlamaanka Fedaraalka oo uu ka […]
Marayknaka oo sheegay in dileen horjooga yaal ka tirsan shabaab
Diytaarada dagaal ayaa weeraro ka gaysto qaybo ka mid ah Gobalka Shabellaha Hoose, kuwaas oo ay ka soo baxayaan warar kala duwan oo ku saabsan. Taliska Ciidamada Maraykanka ee Africom ayaa sheegay in duqayn ay fuliyeen Maraykanka lagu dilay laba horjeeo oo ka tirsan ururka alshabaab, iyaga o sidoo kale sheegay in lagu dhawaacay duqayn […]